Mpanamboatra sy mpanamboatra rafitra fitetezana Slimline tsara indrindra | Media
Sliding Sliding, Slim Frame Sliding, Narrow Frame Sliding, Minimal Sliding, Minimalist Sliding, Panoramic Sliding, Ultra Slim na Ultra Thin Sliding sns dia sasany amin'ny fomba fiteny ampiasaina amin'ny varavarana atsinanana malaza indrindra misy profil aluminium kely hita sy ny haben'ny haben'ny vera. Ny olana mahazatra an'ireny varavarana ireny dia ny fomba fandanjana ny filan'ny fampisehoana sy ny hatsarana. Raha ny MEDO Slimline Sliding System dia afaka mifanaraka amin'ny ilain'ny roa tonta.
Jery ​​tsy voasakana
Estetika | Tery tery
Ny tombony manintona ny vavahady fivezivezena manify dia iray amin'ireo tombony lehibe: mombamomba mahia, tsy dia manelingelina sy mampitombo ny velaran'ny faritra fitaratra.
Ny varavarana mihetsiketsika Slimline dia matetika ampiasaina amin'ny tranobe misy baravarana lehibe milanja 200-600kg eo ho eo mba hamoronana rindrina fitaratra mihetsiketsika misy tsipika vokatra kanto.
Amin'ny Corner Sliding, ny rindrina rehetra dia mety hanjavona hanomezana fijery 360 °.
Ny interlock dia ny mullion mitsangana izay mihaona amin'ireo takelaka mikorisa.
Ny varavarana misosa mahazatra dia manome interlocks eo anelanelan'ny 35mm sy 110mm. Raha manodidina ny 20mm kosa ny fifandraisana fohy kokoa.
Miaraka amin'ny haitao fanakanana hafanana Polyamide, ny MEDO Bi-Fold Series dia manampy ny fitafiana hafana amin'ny ririnina ary hangatsiaka amin'ny fahavaratra, avy eo mampihena ny volan'ny angovo. Ho fanampin'izany, misy safidy ambaratonga maromaro koa azo omena hanatsarana ny toetr'andro.
Ny mekanisma fanidiana teboka marobe avo lenta dia napetraka amin'ny fehin-kibo fanokafana, miaraka amina hidy-bolt ary ireo singa mihidy ao anatiny ho azo antoka.
Teo aloha: Sliding Window
Manaraka: Rafitra mihetsiketsika azo ovaina